Iindlela ezi-3 zeNtengiso ye-Organic inokukunceda ukuba wenze okuninzi kuhlahlo-lwabiwo mali lwakho ngo-2022 | Martech Zone
Uhlahlo lwabiwo-mali lwentengiso lwehle lwaya kutsho kwirekhodi esezantsi ye-6% yengeniso yenkampani ngo-2021, yehle ukusuka kwi-11% ngo-2020.
Gartner, uPhando loNyaka lweCMO lokuchitha ngo-2021
Ngokulindeleke kakhulu kunangaphambili, ngoku lixesha lokuba abathengisi basebenzise inkcitho kwaye bolule iidola zabo.
Njengoko iinkampani zabela izixhobo ezimbalwa kwintengiso-kodwa zisafuna imbuyekezo ephezulu kwi-ROI-ayiyothusi into yokuba. Inkcitho yentengiso yendalo iyenyuka xa kuthelekiswa nenkcitho yentengiso. Iinzame zentengiso ye-Organic efana nokuphucula injini yokukhangela (seo) ithande ukonga kakhulu kuneentengiso ezihlawulelwayo. Baqhubeka nokuhambisa iziphumo nasemva kokuba abathengisi bayeke ukuchitha. Ngamafutshane, ukuthengiswa kwezinto eziphilayo kulutyalo-mali olunobulumko ukukhusela ekuguquguqukeni kohlahlo lwabiwo-mali olungenakuthintelwa.
Ngoko ke, ithini ifomula? Ukufumana okuninzi kuhlahlo lwabiwo-mali lwakho kunye nokuphucula amanyathelo entengiso ye-organic, abathengisi bafuna isicwangciso esahlukileyo. Ngomxube ochanekileyo wamajelo-kunye ne-SEO kunye nentsebenziswano njengento ephambili ekugxilwe kuyo-unokwakha ukuthembela kwabathengi kwaye uqhube ingeniso.
Kutheni i-Organic Marketing?
Abathengisi bahlala beziva becinezelekile ukuba banike iziphumo ezikhawulezayo, ezinokuzisa iintengiso ezihlawulelwayo. Ngelixa uphendlo lwendalo lungenakukunceda ukuba ufezekise i-ROI ngokukhawuleza njengeentengiso ezihlawulweyo, inegalelo ngaphezu kwesiqingatha sazo zonke iitrafikhi ezilandelekayo zewebhusayithi kunye neempembelelo phantse I-40% yazo zonke izinto ezithengiweyo. Ukukhangela kwe-Organic ngumqhubi wexesha elide wempumelelo yokuthengisa ebalulekileyo ekukhuleni kweshishini.
Isicwangciso sokukhula kwezinto eziphilayo sikwanika ithuba lokuba abathengisi bakhe ubudlelwane obuhlala buhleli kunye nabathengi. Emva kokungena umbuzo kuGoogle, 74% yabathengi skrolela kwangoko kwiintengiso ezihlawulelweyo kwaye uthembele kwisiphumo esithembeke ngakumbi sokuphendula imibuzo yabo. Idatha ayixoki-iziphumo zophendlo lwendalo ziqhuba kakhulu itrafikhi engaphezulu kuneentengiso ezihlawulweyo.
Ngaphandle kwezibonelelo zokuqhuba ulwazi lwebrendi kunye nokuthembela kwabathengi, ukuthengiswa kwezinto eziphilayo kuxabisa kakhulu. Ngokungafaniyo neentengiso ezihlawulwayo, akunyanzelekanga ukuba uhlawule ukubekwa kwemidiya. Iindleko zakho zentengiso yendalo yitekhnoloji kunye nokubalwa kwangaphambili. Iinkqubo ezingcono kakhulu zentengiso yezinto eziphilayo ziqhutywa ngamaqela angaphakathi, kwaye zisebenzisa itekhnoloji yodidi lweshishini ukukala.
Iintengiso ezihlawulweyo aziyonto yakudala, kodwa ukuthengiswa kwezinto eziphilayo yinxalenye enkulu yexesha elizayo. Oku kubaluleke ngakumbi njengoko UGoogle uceba ukususa iikuki zomntu wesithathu ngo-2023, inciphisa ukusebenza kweentengiso ezihlawulelwayo. Ngokubandakanya amalinge endalo afana ne-SEO kwisicwangciso sakho sokuthengisa, kunokwenzeka ukuba uhlangabezane neenjongo zoshishino kwaye ufezekise i-ROI ephezulu.
Phucula iZicwangciso zeNtengiso ye-Organic ngo-2022
Ixabiso elinikezelwa yintengiso yezinto eziphilayo liyenza ibe sisixhobo esinamandla, ngakumbi kwimibutho enohlahlo lwabiwo-mali olulinganiselweyo lokuthengisa. Kodwa ukukhula kwezinto eziphilayo kuphumelela kuphela ngesicwangciso esifanelekileyo. Ukulinganisa ukuba imibutho yokuthengisa iphambili phi ngo-2022, iConductor wenze uphando ngaphezu kwama-350 abathengisi ukufunda malunga nezicwangciso zabo zonyaka kunye nokuchonga iindlela zokusebenzisa inkcitho.
Kwaye, ngokutsho kophando, izinto eziphambili eziphambili kwiinkokeli zedijithali kwiinyanga ezizayo ze-12 ziquka amava omsebenzisi wewebhusayithi (UX), ukuthengiswa komxholo, kunye nentsebenziswano enamandla phakathi kwamaqela.
Unale nto engqondweni, nantsi indlela onokuthatha ngayo amanyathelo okuqala ukuya kwinqanaba elilandelayo kwaye ufumane okuninzi kuhlahlo lwabiwo-mali lwakho lwentengiso:
Bopha amandla e-SEO. Ukuthengisa okuyimpumelelo kunika abaphandi ngomxholo ophendula imibuzo yabo-into esiyibiza ngayo ukuthengisa umthengi-kuqala. Kuba zombini B2B kwaye B2C abenzi bezigqibo baqala uhambo lwabo lokuthenga ngophando lwabo, kufanelekile ukutyala imali kwi-SEO. Kodwa ukuhlohlwa kwamagama angundoqo akuyi kunyusa umgangatho wokukhangela. Ukubeka phambili uphando lwegama elingundoqo kunye nophicotho lobugcisa ukuqinisekisa ukuba iinjini zokukhangela zinokubonisa ngokufanelekileyo umxholo wewebhusayithi.
Ukwandisa impembelelo, tyala imali kwiqonga lentengiso yezinto eziphilayo kunye neqela langaphakathi le-SEO ukuqinisekisa ukuhambelana kwenkampani ngokubanzi kumxholo kuwo wonke amajelo anezicwangciso ze-SEO.
Ukusebenzisana kwi-UX egqwesileyo. Ngoku ka yedijithali iinkokheli, Ukugcina i-UX efanelekileyo yewebhusayithi yophawu lwakho kubaluleke kakhulu ngo-2022-kodwa akunakwenzeka ngaphandle kwentsebenziswano. Abasebenzi kwiwebhu, i-SEO, kunye neendima zomxholo bafumana abantu abakwezinye iindima ukuba basebenzisane ngaphantsi kwe 50% yexeshae. Oku kuqhawulwa kunokubangela lula umsebenzi ophindwe kabini, imiqobo, kunye nezenzo ze-SEO ezingahambelaniyo. Amanyathelo e-UX anempumelelo abandakanya unxibelelwano oluthe gqolo phakathi kwamasebe, luqaqambisa imfuneko yokudilizwa kweesilo zentlangano. Ibhonasi eyongeziweyo ene-UX ebalaseleyo? Yona iphucula ukhangelo lwakho lukaGoogle.
Ukulinganisa iziphumo. Umxholo oqhelekileyo uphononongo lwethu olufunyenweyo sisidingo sokulinganisa impumelelo yeenkqubo ze-SEO ngo-2022. Ukuvavanya ngokuqhubekayo ukusebenza kobuchwepheshe be-SEO kunye nezenzo kunokwazisa izinto eziphambili zakho.
Zenzele inceba: phambi kokuba ukuphumeza inkqubo yakho ye-SEO, misela ukuba yeyiphi i-metrics oza kubeka iliso (umzekelo, i-traffic, i-keyword ranking, kunye nesabelo semarike) kunye nendlela oza kulinganisa ngayo iziphumo. Oku kukuvumela ukuba uphucule umxholo wakho kwaye ubeke phambili amanyathelo asebenzayo-ukugcina ixesha kunye nemali.
Uhlahlo lwabiwo-mali oluncitshisiweyo lwentengiso akufuneki luthethe isicwangciso sokuthengisa esikumgangatho ophantsi ka-2022-ufuna nje ukwandisa izixhobo zakho. Ngesicwangciso esomeleleyo kunye nokugxila kwintengiso yezinto eziphilayo, unokwakha intembeko yabathengi kunye nokwazisa ngebhrendi ngelixa uqhuba ingeniso.
Unomdla wokufunda ngakumbi? Jonga ingxelo yamva nje yoMqhubi:
Ubume beNtengiso ye-Organic ngo-2022
tags: 202020212022Uphando lonyaka lwe-cmo lokuchithaumqhubiumlingisiUhlahlo-lwabiwo mali lokuthengisaisicwangciso sokukhula kwezinto eziphilayourhwebo lwezinto eziphilayoorganic search marketingbuyela kutyalo maliromienjini yokukhangela nounzeenjiniSEOimeko yokuthengisa organicux